Litecoin nkwụnye Self Guide - Oke Magazine - pisklak.net
Litecoin nkwụnye Self Guide – Oke Magazine
Nnọọ, Litecoin lovers! Obi dị anyị ụtọ ịnabata gị ebe a ọzọ maka akwụkwọ akụkọ Litecoin ọzọ. Izu gara aga anyị kọwara Litecoin Uru karịa Bitcoin. Ọ bụrụ na ị na-agbaso ozi ọma mgbe niile, ruo ugbu a ị mụtara na Litecoin dị ngwa karịa Bitcoin. Ọzọkwa, ọ na-enyere ụzọ adịghị ọnụ ala azụmahịa, na-echekwa self love gị karịa 100 ugboro. Taa, kwe ka anyị jee ije gị na ntuziaka ntinye akwụkwọ nke Litecoin a.
Litecoin Depositing Uru
Dị ka ị nwere ike ịchọpụta, June bụ Litecoin Month na ọkacha mmasị gị cha cha cha cha Oke. Enwere ọtụtụ self love pụrụ iche ị ga – enweta maka itinye na Litecoin. Ndị a gụnyere:
Ọ dịghị wagering bonuses free spins cashback dịghị mmachi bonuses, t ọtụtụ ndị ọzọ uru.
Anyị ga-agan’ihu na-akwalite nkwụnye self explanatory t ndị ọzọ cryptos, mana na June LTC na-elekwasị anya na ọtụtụ ezi ihe kpatara akọwapụtara na mbụ.
Ikwụnye self service Litecoin Dị Mfe
Iji nwee ike ị nweta onyinye ndị ahụ pụrụ iche, itinye self service Litecoin bụ isiokwu inyocha. Yabụ, ka anyị bido website t mbido. Anyị na-eche na ị nwere akaụntụ cha cha gị niile, yana obere akpa mkpuchi meghere.
Nzọụkwụ mbụ na itinye self t Litecoin bụ nbanye na akaụntụ cha cha gị ma họrọ nhọrọ”nkwụnye self” nke na-ewega gị ozugbo na self. Na Cashier, ị ga-ahụ nhọrọ atọ: nkwụnye self indulgent, wepu, gbapụta. Nkwụnye self love bụ nke ịpị. Họrọ Litecoin dị ka nkwụnye ego. Nwere ike pịgharịa gaa na ntakịrị iji họrọ LTC. Ọzọ, kọwaa self love ole ị chọrọ itinye. Biko rịba ama ntakịrị nkwụnye self service bụ LTC nke $10. Pịa bọtịnụ”nkwụnye self love”n’okpuru ngalaba ego. Ozugbo ịmechara usoro a, adreesị LTC ga-apụta na ihuenyo gị n’okpuru koodu QR. Could nwere ike idetuo adreesị ahụ ma ọ bụ nyochaa koodu QR pụtara d e ihuenyo ahụ. Ugbu a, gaa na”izipu” ngalaba nke obere akpa gị miniature mado adreesị Litecoin nke emepụtara na mbụ na ihuenyo gị. Na ịpị”zipu” na-akwụsị usoro nkwụnye ego t self na-egosi d e akaụntụ cha cha gị. Ọ bụrụ na ị na-eji QR code, nanị I scanomi un t ekwentị gị.
Mara: Biko mee nyocha gị na obere akpa Litecoin na arụmọrụ ha dị ka Casino Intense enweghị ike ịza ajụjụ maka oge nkwenye na ụgwọ sitere na njedebe ha.
Usoro itinye self servicen’okpuru otu nkeji
Nzọụkwụ ndị dịn’elu nwere ike iyi ka ha karịrị akarị na ileba anya mbụ. Iji gosi gị otu usoro a si dị ngwa, anyị etinyela obere vidiyo nke ọkara nkeji, gụnyere usoro ndị dị n’elu.
Lelee otu esi dị mfe na ngwa ngwa. Nkwụnye self service Litecoin nwere ike ịnye gị oheren’ọkwá kachasị mma na June. O nwekwara ike ime ka usoro azụmahịa ahụ dị ngwa ma chekwaa self love ị ga-eji na ụgwọ azụmahịa.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ enyemaka na Litecoin nkwụnye self explanatory, nweere onwe gị ịkpọtụrụ nkwado ndụ anyị. Ha na-anọghị n’ịntanetị. Jisie ka anyi mara ka o si gaa!